Qalabka GNU / Linux: Shirkadaha iyo Kumbuyuutarrada leh GNU / Linux sanduuqa | Laga soo bilaabo Linux
Muddo dheer, mid ka mid ah himilooyinka waaweyn, riyada ama hamiga isticmaalayaasha ama xubnaha Barnaamijka Bilaashka ah, Ilaha Furan iyo Bulshooyinka GNU / Linux, waa tayada Nidaamyada Hawlgalka ama Qaybinta (Distros) mashquul boqolkiiba wanaagsan ee doolshaha, marka la eego Sistemyada Hawlgalka loo adeegsaday kombiyuutarada, desktop iyo laptop labadaba.
Iyo warar badan oo dareenkan ka mid ah ayaa sii kordhayay, in kasta oo boqolkiiba boqol weli aad u hooseeyo. Sida laga soo xigtay bogga Netmarketshare, gudaha 12 bilood ee la soo dhaafay boqolkiiba ayaa loo qoondeeyay 2.18%, halka bisha Juun 2020, waxay ku taalaa 3,61%, oo tilmaamaysa u janjeedh yar koritaanka GNU / Linux ee Desktop-ka kombiyuutarada isticmaala, guud ahaan.
Intaas waxaa sii dheer, oo ah cabirrada wanaagsan ee ay tilmaamayso Netmarketshare ku saabsan GNU / Linux kumbuyuutarrada, waxaa lagama maarmaan ah in la gaaro isbeddel joogto ah oo lagu kalsoonaan karo in maalin in ka badan shirkaduhu waxay rakibaan warshad, labadaba kumbuyuutarrada desktop-ka iyo laptop-ka, labadaba GNU / Linux Distros, iska leh ama beel ahaan, loo habeeyay oo si fiican loogu qaabeeyay waxqabadka ugu fiican iyaga.
Sidan oo kale, si ay u awoodaan inay bixiyaan wax aad u fiican taageerada iibka kadib, haddii loo baahdo, loogu talagalay a qanacsanaanta isticmaalaha sare, cusub ama aan ahayn, ee GNU / Linux.
1 Qalabka & GNU / Linux
1.1 Shirkado kombuyuutarro wata iyo warshad GNU / Linux ah oo la rakibay
1.2 Lagu ansixiyay barnaamijka RYF
1.3 Qaar kale kuma jiraan barnaamijka RYF
Qalabka & GNU / Linux
Ku saabsan qodobkaan, sidaan horay ugu soo sheegnay daabicid hore oo la yiraahdo "Barnaamijka Shahaadada Alaabada Qalabka: Ixtiraam Xorriyaddaada", hadda waxaa jira barnaamij taageero oo heer sare ah oo la doonayo in lagu dhiirrigeliyo gaaritaanka himiladaan.
Xigasho ayuu yiri boostada, waxaan ku darnaa waxyaabaha soo socda:
"Barnaamijka Shahaadada wax soo saarka qalabka ee Software Free Foundation (FSF) oo loogu magac daray "Xushmee Xoriyadaada" (RYF) wuxuu bixiyaa shahaado rasmi ah iyo calaamado lagu soo bandhigi karo aaladaha qalabka ee u qalma isku mid. Barnaamijkani wuxuu dhiirrigelinayaa abuurista iyo iibinta qalabka kor u qaadaya ixtiraamka xorriyaddayada iyo asturnaanta, iyo xakameyntiisa annaga, adeegsadayaasha (macaamiisha)".
Sidoo kale, gudaha website-ka rasmiga ah barnaamijkan FSF RYF, waxaad ka heli kartaa liis yar laakiin fiican Qalab iswaafajin kara oo shahaado haysta, gaar ahaan kombuyuutarrada Goobaha Shaqada, Servers iyo Laptops con GNU / Linux, iyo xitaa horeyba loo rakibay
Shirkado kombuyuutarro wata iyo warshad GNU / Linux ah oo la rakibay
Lagu ansixiyay barnaamijka RYF
Dareenka: Shirkadda tiknoolajiyadda oo maalgelin ku samaysa R&D iyo sumcadeed u gaar ah kombuyuutarro shaqsiyadeed, oo ku yaal New Jersey, Mareykanka
Vikings: Shirkad martigalinaysa websaydh gebi ahaanba bilaash ah, oo adeegyadeeda ay ku saleysan yihiin 100% qalab kumbuyuutareed bilaash ah, softiweer bilaash ah kuna shaqeeya tamar cagaaran oo la xaqiijiyay Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin dukaan internetka ah oo ay ku bixiyaan adeegyo iyo xarumo bilaash ah. Xarunteedu waxay ku taal Aachen, Jarmalka.
Farsamo Anshaxeed: Shirkadda iibka oo u shaqeysa sidii dukaan internet ah oo iibiya qalabka la jaan qaada Nidaamyada Howlgalka oo si buuxda u ixtiraamaya xorriyadda dadka isticmaala, sida lagu qeexay Mashruuca GNU. Xarunteedu waxay ku taal Bucharest, Romania (Midowga Yurub).
Qaar kale kuma jiraan barnaamijka RYF
Linux La Xaqiijiyay
Ugu dambeyntiina uguyaraan, waxaa wanaagsan in la ogaado in shirkadaha waaweyn ee farsamada qaarkood ay jecel yihiin Dell y HP, waxay leeyihiin qaar Barnaamijyada iibinta kumbuyuutarka ee leh GNU / Linux sanduuqa, Halka kuwa kale Ragga waaweyn ee Tech, waxaa ka go'an in ka badan ama kaliya Server Linux. Laakiin dhammaantood waxay gacan ka geystaan ​​badar ciid ah si loogu guuleysto Miisaska isticmaalayaasha, guud ahaan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan dalabyada hadda jira Qalabka Kombuyuutarka (PC-yada) oo leh warshad GNU / Linux ah oo la rakibay, oo ay sii kordhayaan shirkadaha ganacsiga; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Qalabka GNU / Linux: Shirkadaha iyo Kumbuyuutarrada leh GNU / Linux sanduuqa
Aad baad ugu mahadsantahay inaad noo sheegto.
Pi-KVM: Mashruuca Wareejinta KVM ee Raspberry Pi